ह्याप्टिक प्रतिक्रिया: टचस्क्रिनको विकास | Martech Zone
शनिबार, मे 22, 2010 शनिबार, जून १,, २०१। Douglas Karr
यदि तपाईंले ह्याप्टिक टेक्नोलोजीको बारेमा सुन्नु भएको छैन भने, तपाईं गर्नुहुनेछ। एक दशक भन्दा पहिले, एमआईटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले उपकरणहरू विकास गर्न शुरू गरे जसले मानिसलाई भर्चुअल वस्तुहरू महसुस गर्न प्रत्यक्ष उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ। पछिल्लो दशकमा, टेक्नोलोजीले टचस्क्रिनमा आफ्नो बाटो बनाउन शुरू गर्यो।
गत वर्ष, विच्छेदन CES मा एक टचस्क्रिन डेमो'd कि haptic प्रतिक्रिया प्रदान। तपाईको औंलाहरूमा फर्केन्सी र उत्तेजना समायोजन गरेर, तपाई भावनालाई पुन: उत्पादन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ जुन तपाईले वास्तवमा कुनै वस्तुलाई छुने बेलामा महसुस गर्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाईं सतह चिकनी वा Sandpaper जस्तै उग्र लाग्न सक्छ। अज्ञातबाट सुधारिएको पहुँचको लागि प्रविधिसँग मात्र कम्प्युटर प्रणाली खोल्ने अवसर छैन, यसले वास्तवमा सम्पूर्ण रूपमा कम्प्युटरहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न सक्दछ।
एउटा उदाहरण टच स्क्रिनहरूमा भर्चुअल कीबोर्ड हो। म एउटा आईफोनमा ड्रोड प्रयोग गर्दछु किनकि स्पर्शशील प्रतिक्रिया नभएको यन्त्र प्रयोग गर्दा मसँग गाह्रो हुन्छ। यदि मैले एक आईफोन र कुञ्जीपाटीले मेरो टचमा हेप्टिक प्रतिक्रिया प्रदान गर्न सक्दछु भने, म सक्षम हुनेछु महसुस कुञ्जीहरू र अधिक सही तिनीहरूलाई थिच्नुहोस्।
टेक्नोलोजी भिडियो खेलहरू भन्दा पर र कला, चिकित्सा र मोटर वाहन टेक्नोलोजीमा पनि विस्तार हुन्छ। सक्षम भएको कल्पना गर्नुहोस् स्पर्श जेरूसलमको पश्चिमी पर्खाल, वा एक स्टेरि wheel व्हीलको कल्पना गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई हेप्टिक प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ यदि यदि तपाईं लेनमा बदल्दै हुनुहुन्थ्यो जहाँ अर्को कार रहेको थियो! वा अझै पछाडि कल्पना गर्नुहोस् - एक चिकित्सकले अभ्यास गरिरहेको छ वा दूरबाट चलाइएको उपकरणको प्रयोग गरीरहेको छ जसले संवेदनशील शल्य प्रक्रियाहरूका लागि सही हेप्टिक प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ।
यो सबै सम्भावनाहरूको बारेमा सोच्न रमाईलो छ कसरी मार्केटिंग संचारहरू परिवर्तन हुन सक्छ यदि तपाईं वास्तवमै गर्न सक्नुहुन्छ स्पर्श तपाइँका ग्राहकहरु अनलाइन संलग्न गराईएको बेला।
टैग: ह्याप्टिकhaptic प्रतिक्रियाटच स्क्रिन
मई 22, 2010 मा 4: 48 एएम
म सबै ह्याप्टिक प्रतिक्रियाको लागि छु तर आईफोनसँग नहुँदा मलाई एकपटक कहिले पनि समस्या आएको छैन। प्रत्येक पटक जब म स्क्रिन कुञ्जीपाटीमा पत्र थिच्छु, पत्रको एक विशाल संस्करण तुरुन्तै मलाई बताउँदछ कि मैले कुञ्जी थिचे र कुन कुञ्जी मैले थिचेको थियो।
निश्चित, यो haptic छैन। यो दृश्य हो। तर यो मेरो नम्र राय मा उही उद्देश्य पूरा हुन्छ
मई 22, 2010 मा 9: 53 PM
वाह! मैले यसको बारेमा सुनेको छैन तर यो एकदम अचम्मको देखिन्छ। हुनसक्छ यो आउँदो पुस्ताको आईफोनमा हुनेछ।